Filohan’ny Tetezamita, Rajoelina : « tonga aho hitondra vahaolana ho an’ny vahoaka malagasy… » · Aponga
Filohan’ny Tetezamita, Rajoelina : « tonga aho hitondra vahaolana ho an’ny vahoaka malagasy… »
Haka bahana amin’izay. Nigadona an-tanindrazana, omaly, ny filohan’ny Tetezamita, Rajoelina. Nanao fanambarana fohy ny tenany teo am-pahatongavana teny Ivato. «Misy fotoana hanginana ary misy fotoana hitenenana sy hijoroana ary indrindra handrosoana vahaolana ho an’ny vahoaka malagasy, hanavotana ny firenena…», hoy izy. Notsiahiviny avy eo fa tonga eto ny tenany rehefa avy nametraka ny dingana tokony hatao sy hitondra vahaolana. «Tsy hita loatra tamin’ny fanehoan-kevitra tao anatin’ny efa-taona. Tsy resy akory ny olo-mangina», hoy ihany izy. Na izany aza, nomarihiny fa nanaraka ny fiainam-pirenena ny tenany tao anatin’ny efa-taona. Nisehoana tranga roa teto amin’ny firenena, araka ny nambarany. Eo ireo mihazakazaka mitady sy handrombaka ny fahefana. «Ny ahy sy ny mpiara-miasa kosa, mihazakazaka amin’ny fitadiavana vahaolana. Feno ny fepetra amin’izao fotoana izao ka hihaino ny vahoaka malagasy ny tenako», hoy ny filohan’ny Tetezamita, Rajoelina. Natsidiny avy hatrany fa hihaona amin’ny vahoaka malagasy amin’ny alalan’ny valandresaka ny mpanorina ny Mapar, amin’ny alahady 18 febroary izao.
Hanao fanambarana ho an’ny vahoaka malagasy
Tsy mbola naneho ny antsipiriany momba izany ny tenany. Ny toerana sy ny fotoana , tsy mbola fantatra. «Hisy fanambarana sy resaka hataoko ho an’ny vahoaka malagasy… Aseho mivantana amin’ny fahitalavitra izany. Holazaina amin’ny manaraka eo ihany ny fandaharam-potoana. Fotoan-dehibe ifanomezana amin’ny vahoaka io satria efa-taona tsy hita sy tsy re ka fotoana izao hitenenana», hoy izy. Niarahaba sy nirary soa ho an’ny vahoaka malagasy ny tenany amin’izao taona vaovao izao. «Mino sy manantena aho fa hifarana ao anatin’ny hafaliana sy firavoravoana ity taona ity…», hoy izy teo am-pamaranana.
Tsiahivina fa tonga nitsena azy tao amin’ny efitrano fandraisana olo-manan-kaja (VIP) ao amin’ny seranan’Ivato ireo depiote Mapar sy solontenan’ny fikambanana samihafa. Teo koa ireo andiana olona vitsivitsy tety ivelany, naneho ny hafaliany amin’ny fihaonana sy fahitana indray ny mpanorina ny TGV/Mapar.